Kulan Looga Hadlayay Amaanka Oo Lagu Qabtay Afgooye | Radio Muqdisho	Thursday, June 20th, 2013	Bogga Hore
Kulan Looga Hadlayay Amaanka Oo Lagu Qabtay Afgooye
Published on July 9, 2012 by Canab · No Comments · 1,279 views
Kulan ay soo qaban qaabisay hay’adda wada hadalka Bulshada ee CCD kaa oo looga arrinsanayay sidii shacabka ku nool dagmada Afgooye ay ciidanka kala shaqeyn lahaayeen amaanka ayaa lagu qabtay gudaha dagmadaasi.
Kulankan manta ay wada qaateen Maamulka degmada Afgooye ee Gobolka Shabeelaha hoose, saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo shacabka degmada ku nool ayaa looga hadlay sidii ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya loogu caawin lahaa in ay ka hortagaan falalka ay shacabka u maleegayaan maleeshiyada Al-Shabaab.
Furitaanka kulanka ayaa waxaa ka hadlay General Ibraahin Aadan Yarow oo ka mid ah saraakiisha ciidanka ee degmada Afgooye waxa uuna ka dalbaday Shacabka degmada in ciidanka Nabad geliyada degmada ay kala shaqeeyaan ka hortaga dhibaatada shabaab ee haraadigooda ku dhuumaaleysanay xaafaddo ka mid ah degmada si loo badbaadiyo dhibaatada ay u geystaan ummadda Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha degmada Afgooye ee Gobolka shabeelaha hoose C/llaahi Cabdi oo ka hadlay goobta ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in hay’adda wada hadalka bulshada meel isugu keento shacabka ka dibna dareensiiso in ay yihiin dad xaq u leh nabad in ay ku noolaan karan kana arinsan karaan aayahooda isagoo sidoo kale uu sheegay in maamulka uu ka shaqeyn doono hormarka Degmada iyo amnigeeda.
Kulanka ayaa ah kii ugu horeeyay oo loo qabto shacabka ku nool degmada Afgooye tan iyo markii laga saaray maleeshiyada kooxda Al-qaacidda oo shacabka u adeegsan jiray dhibaateynata shacabka, iyadoo shacabkuna uu balan qaaday in ay ka hortagi doonaan qof walba oo isku daya in uu dib ugu celiyo Gumeysigii shabaab.